Soohan (Sheeko faneed) – Kaasho Maanka
#1 Qaybta Koowaad
#2 Qaybta Labaad
#3 Qaybta Saddexaad
#4 Qaybta Afraad
Dhul carro san ah misena bilicsan laguna jiro xilligii gu’ga oo aan muddo dhawr sitimaan ah roobku kala qaadin. Xareeddu kob kastaba wadhan tahay, naftu u muhanayso, ishuna aanay ka libiqsanayn mar qudha, ceel kastana uu biyo la heed-heetinayo. Soohan deegaankan Awaare ee sidaas u bilicsan ayaa ay ku dhalatay xilli barqo ah oo gu’ ah, roob geel dooje ahina uu da’ayo ayaa ay ifka timid. Hooyadii dihatayna ay ku indho qabowsatay, halka aabbeheedna uu dhuxul madow dhankeeda u tuuray. Isaga oo kolkii loo sheegay dhalashada gabadhiisa Soohan ku masaalay gudcur madow, garaad li’i iyo geed naageed oo ku soo biiray qoyska iyo tolkaba.
Waxa uuna go’aansaday in uusan dan iyo heello ka gelin gabadhaas u dhalatay, hadday samaato iyo hadday xumaataba. Hooyada dhashay gabadha ee Saaqa oo da’ ahayd, habrihii wax sheeg-sheegi jirayna ay u sheegeen goshan mooyee tu kale kuuma hadhin, ayaa uu ogaa Xaaji Samaalle. Durbadiiba, Saaqa oo aan afartan bixin ayaa uu gashaanti kale u taf rogtay, iyadiina ka haayiray. Gabadh yar oo heelimaadsan, tolkana aan ka dheerayn ayaa loo hooyay Xaaji Samaalle, deedna uu derinta kula loollamay, walow uu ahaa tabcaan aan garays iyo guntin naageed furi karin, balse tala Alle iyo tu ina ragg baa kaalmeysay!
Badiba dadka deegaanku, gaar ahaan inta tolka la ah reer Xaaji Samaalle ma ay jeclaysan gabadhan Soohan oo lama mahadin jirin haddii magaceeda la maqlo ama muuqeedaba la arko. Soohan. Kolkii ay yara garaadsatay oo dabka iyo biyaha ay kala garatay, ayaa ay dareentay in aan tolkeed ku faraxsanayn una riyaaqsanayn. Balse, qofka keliya ee daneynaya ay tahay hooyadeed Saaqa oo aabbo iyo hooyaba u noqotay.
Aslam alleykum wll meeye qaybihii kle ee qisada SOOHAAN…?
W/Q: Cabdifataax Xasan-Barawaani 6th November 2019